Sauress : Articles of the author BULAWAYO
Articles of the author BULAWAYO
Soldiers and police deployed in large numbers in Zimbabwe's second city Bulawayo on Monday to enforce a ban on an anti-government demonstration, as the country's main opposition party sought to overturn that decision in court. The street protest was (...)
BULAWAYO The Saudi Gazette
Sri Lanka bags tri-series trophy
Sri Lanka capped a productive month of cricket in Zimbabwe by lifting the triangular series trophy Sunday, beating the hosts by six wickets in the final. Having comfortably beaten Zimbabwe in both Tests in Harare at the start of November, Sri Lanka (...)
Zimbabwe beats Windies to face Lanka in final
Zimbabwe beat West Indies by five runs under the Duckworth-Lewis method in Friday's rain-affected One-Day International to qualify for the triangular series final against Sri Lanka. Tendai Chisoro played a crucial role with bat and ball as Zimbabwe (...)
Sri Lanka beats West Indies by one run in ODI
West Indian batsman Evin Lewis struck his maiden one-day international hundred but a series of run-outs helped Sri Lanka to secure a one-run victory at Queens Sports Club on Wednesday and advance to the triangular series final. Playing just his (...)
Zimbabwe vs. Lanka ODI washed out
Zimbabwe's One-Day International clash with Sri Lanka was abandoned Monday after heavy rain at Bulawayo's Queens Sports Club left the outfield too sodden to continue. The hosts had won the toss and elected to bat first, before progressing to 55 for (...)
Zimbabwe salvages tie with Windies
Shai Hope hit his maiden One-Day International century but the West Indies could only stutter to a dramatic tie in a triangular series clash with Zimbabwe here Saturday. With Hope scoring 101 in just his second ODI the West Indies was well on track (...)
Part-timers spin Kiwis to win
Part-time spinners Ish Sodhi and Martin Guptill bagged three wickets each as Zimbabwe folded on the final day of the second Test to hand New Zealand a comprehensive 254-run victory Wednesday. New Zealand won the two-match series 2-0 after bowling (...)
New Zealand eyes victory after late wickets
Seamers Trent Boult and Tim Southee struck late to leave New Zealand needing seven Zimbabwe wickets on the final day of the second Test after setting their host an unlikely victory target of 387 runs Tuesday. Zimbabwe closed day four at the Queens (...)
Ervine's maiden Test ton sparks Zimbabwe fightback
Craig Ervine's maiden Test century allowed Zimbabwe to enjoy its best period of a difficult series, as it held New Zealand's bowlers at bay for much of the third day of the second Test Monday. Ervine made the most of the early life granted to him to (...)
Zimbabwe digs in after NZ posts huge total
Zimbabwe's top order finally showed some backbone Sunday but the host was nevertheless facing an uphill battle in the second Test after New Zealand posted an enormous total on day two at Queens Sports Club. After spending the better part of two days (...)
Tom Latham scored a century for a second successive match as New Zealand pulverized the home bowling to finish on 329 for two on the first day of the second Test against Zimbabwe Saturday. Latham, who made 105 in the first Test, scored 136 before (...)
Zimbabwe's top player out of second Test
Zimbabwe opener Hamilton Masakadza has been ruled out of the second Test against New Zealand that begins at the Queens Sports Club Saturday in a major blow to the host's already slim hopes. The 32-year-old, whose 30 Test appearances make him (...)
New Zealand seals innings win
Sean Williams scored a maiden Test century in vain as New Zealand clinched a comprehensive innings and 117-run victory over host Zimbabwe on day four of the first Test Sunday. Williams, who was battling flu, scored the quickest Test ton by a (...)
Ross Taylor and BJ Watling scored centuries as New Zealand closed in on victory against hapless Zimbabwe after day three of the first Test Saturday. Taylor finished unbeaten on 173 and shared a sixth-wicket stand of 253 with Watling (107) to take (...)
Latham emulates father as Kiwis dominate
Opener Tom Latham followed in his father's footsteps as he ground out a century on day two of the first Test against Zimbabwe to give New Zealand a commanding first-innings lead at Queens Sports Club Friday. Almost 24 years after his father, Rod, (...)
Wagner rocks Zimbabwe as Kiwis take charge
Left-arm seamer Neil Wagner's raw pace and aggression proved too much for an out-of-touch Zimbabwean batting lineup as New Zealand stamped its authority on the first Test on the opening day at Queens Sports Club. On a surface offering little to the (...)
Kiwis cricket begins a fresh era
New Zealand's Test cricket team begins a fresh era under new captain Kane Williamson Thursday, when it starts a two-match series against Zimbabwe at Queens Sports Club. New Zealand's last Test assignment took place back in February, when former (...)
Zimbabwe fights back in Bulawayo
Chris Mpofu took 4-92 and Vusi Sibanda hit an unbeaten half-century to spearhead Zimbabwe's fightback against New Zealand on day two of the one-off Test Wednesday. Opener Sibanda was 53 not out to guide Zimbabwe to 82-1 at stumps at Queens Sports (...)
AP BULAWAYO The Saudi Gazette
Bangladesh wins 4th ODI
Tamim Iqbal hit 61 and Rubel Hossain took 4-31 Friday as Bangladesh salvaged some pride from its disappointing tour of Zimbabwe with a six-wicket win in the fourth One-Day International. Zimbabwe still has an unassailable 3-1 lead in the five-match (...)
Sharma ton in vain as Zimbabwe wins by 6 wkts
A maiden century for India by Rohit Sharma was not enough to stop Zimbabwe from snatching a dramatic victory in the first ODI of a three-way series here Friday. The home team won at a gallop with 10 balls and six wickets to spare in the first of (...)
0 BULAWAYO The Saudi Gazette
Zimbabwe beats Bangladesh in ODI
Zimbabwe defeated Bangladesh by 69 runs in the third of five One-Day Internationals at the Queen's Sports Club here Friday. Zimbabwe put on a huge target of 323-7 in 50 overs and then bowled out Bangladesh 254 in 44.2 overs. Raqibul Hasan (78) and (...)